काठमाडौं, Mar 14, 2020
सन् २०११ को जनगणनाअनुसार उपत्यकामा सवा छ लाख घरधुरी छन् । जसमा काठमाडौंमा ४ लाख ३५ हजार ५४४, ललितपुरमा एक लाख ९ हजार ५०५ र भक्तपुरमा ६८ हजार ५५७ छन् । तर यो संख्या ८ वर्षपछि बढेर झण्डै ८ लाख कै हाराहारीमा पुगेको छ । अहिलेलाई खाली जग्गाको परिकल्पना छाडौं । ८ लाख घरको २५ प्रतिशत कौशीलाई अनुमानित एक आना जग्गा खाली ठान्ने हो भने ८ लाख आना नै खाली जग्गा हुन आउँछ । अर्थात ५० हजार रोपनी । एक रोपनी जग्गामा उब्जनी गरेको तरकारीले कम्तीमा दश परिवारलाई राम्रोसंग खान पुग्छ ।
हामी उपत्यकाबासीले महंगो मात्रै होइन, बिषैविष भएको तरकारी खाइरहेका छौं । त्यसमा समय खर्च र स्वास्थ्य पनि दिनदिनै खराव पारिरहेका छौं । यसको विकल्प तपाईसंग छ तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने तर्फ तपाईको ध्यान गएको छैन् ? वा, समय अभावले ध्यान गएपनि केही गर्न सक्नु भएको छैन् ?
तपाई कौसी खेती गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ तर समय वा जागर छैन् भनेपनि केही छैन् । विकल्पहरु थुप्रै छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुरले उपत्यकाबासीले स्वस्थकर, अर्गानिक तरकारी खान पाउन भनेर अनुदानमा कौसी खेती सामाग्री वितरण गर्दैछ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दार्जे लामाले काठमाडौं बानेश्वरबाट यसको सुरुवात गरेका छन् । सुरु भएको झण्डै डेढ महिनामा उनले अवलोकन पनि गरेका छन् । मन्त्री लामाले भने । हरेक घरको छतअनुसार आकर्षक कौशी खेती गर्ने हो भने उपत्यकाबासीले तरकारी त बजारबाट किन्न पर्दैन पर्दैनसंगै वायु प्रदुषणबाट भोग्नु परेको पीडाबाट समेत मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
केन्द्रका प्रमुख निर्मल गदाल भन्छन्, ‘हामीले अर्गानिक भनेर खाएका तरकारी कतै सर्टिफिकेशन भएका हुदैनन् । तर आफ्नै कौशीमा तरकारी उब्जाउन सक्ने जागर हुने हो भने त्यो शत प्रतिशत अर्गानिक र स्वस्थकर हुनेछ ।’ उपत्यकाबासीको मुख्य समस्या भनेको समय नहुनु ।
गदालका अनुसार धेरै घरधनीलाई आधुनिक कौशी खेती वा माटो रहित कौशी खेतीको ज्ञान छैन् वा भएपनि धेरै कमलाई मात्रै थाहा छ । माटोमा तरकारी रोप्दा घरलाई भार थपिने वा छत फोहोर हुने जस्ता परम्परागत सोँच हटाउन गदाल उपत्यकाबासीलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ ।
पछिल्लो समयमा व्यवस्थित, आधुनिक र माटोरहित खेतीबाट मनग्य उत्पादन लिन सकिन्छ ।
‘बास्तवमै धुलो, धुवाका कारण कारण उपत्यकाबासी उकुसमुकुस छन् । कंक्रिटको शहरमा हरियाली छैन् । कौशी खेतीले वातावरणमा समेत सुधार गर्छ । वनसपतिले अक्सिजनको काम समेत गर्लाले मानववस्तीलाई कौशी वा शहरी खेतीले निक्कै राम्रो गर्छ ।’
उनको अनुसार सय वटा पोकामा २० थरिका तरकारी तथा फलफूल रोप्ने हो भने त्यसले ५ जनाको परिवारलाई एक मौसमलाई पुग्ने तरकारी उत्पादन दिन्छ । सरदर एक परिवारले मासिक ५ हजारको तरकारी खपत बचाउदा पनि निक्कै सहयोग पुग्ने गदाल बतानुहुन्छ । मानौ ५ सय परिवारले आफ्नो छतमा तरकारी उब्जनी गर्ने हो भने मासिक ५ हजारको दरले जोड्दा मासिक २५ लाख रुपैँया हुन आउँछ । यसो गर्न सक्यो भने उपत्यकामा तरकारीको चाप घट्नुको साथै उपत्यकाबासीको पैसा बाह्य जिल्ला वा विदेशमा पठाउनु पर्दैन ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले यस वर्ष २ हजारलाई अनुदानमा कौशी खेती वितरण गर्दैछ । ५० पोकाको व्यवस्थित कौशीलाई सरदर २० हजार पर्न आउँछ । २ हजार परिवारलाई झण्डै चार करोड बरावरको कौशी खेती वितरण गर्दा उपत्यकाबासीले झण्डै एक वर्षमा १२ करोडको तरकारी उब्जनी गर्न सक्छन् । अर्थात आयत रोकिदा यो रकम पनि यही रहन्छ । जसले आयतको भार घट्छ ।
आव २०७६÷७७ को वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिककीकरण तथा पष्ठपोषण संकलन गोष्टीमा कृषि ज्ञान केन्द्र (ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौं) का प्रमुख निर्मल गदाल सहित दिनेश जमरकट्टेल र सिर्जना न्यौपानले गत अशोज ५ गते गरेको एउटा प्रस्तुतीको तथ्याङलाई हेर्दा यी तीन जिल्लामा १८ हजार १४५ हेक्टर जग्गा घडेरी वा बाँझो छ । उपत्यकाबासीलाई अझै ५ लाख मेट्रिक टन खाद्यन्न अभाव नै छ ।
जनसंख्या हेर्दा काठमाडौंमा १७ लाख ४४ हजार, २४०, ललितपुरमा ४ लाख ६८ हजार १३२ तथा भक्तपुरमा ३ लाख छ हजार ६५१ गरी कुल ३१ लाख ६३ हजार २१३ रहेको छ । बाहिरी जिल्लाबाट आएकाहरु त झन् कति कति ? यही तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने एउटा परिवारले मासिक ५ हजारको तरकारी खपत गर्छन भने मासिक एक अर्ब ६० करोडको तरकारी आयत गर्नुपर्छ । घर भाडामा बस्नेको कुरै छाडौं अहिलेलाई ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दैनिक झण्डै ५÷६ टन अर्थात साढे ५ लाख केजी तरकारी र ५० हजार केजी फलफूल भित्रन्छ । उपत्यकाबासीले यो जागर गर्ने हो भने आयत प्रतिष्थापन गर्न सहजै सक्ने ठानेर निर्मल गदालले उपत्यकामा कौशी खेतीलाई प्रभावकारी रुपमा लैजान खोज्दैछन् ।
उपत्यकाबासीले आफ्नो घरको कौशीमा मात्रै तरकारी तथा फलफूल बाली लगाउने हो भने ७५ प्रतिशत तरकारीजन्य वस्तु आयत गर्नु नपर्ने हुन्छ । उपत्यका अर्थात काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका २१ वटा स्थानिय तहहरुमध्ये रिङरोड भित्र मात्रै मानव सागर ओइरिएका छन् ।
हुन त ललितपुर र भक्तपुरको मूख्य शहरी क्षेत्रमा पनि नभएका होइनन्, तर यी जिल्लाका वाहिरी भाग अझै पनि कृष योग्य जमिनहरु प्रसस्त छन् । जहाँका किसानले आफ्नो लागि आफै उत्पादन गरिरहेका छन् । झण्डै–झण्डै खान पुग्दो छ । काठमाडौं जिल्लाको उत्तर–पूर्वी भागका बासीले पनि आफ्नोलागि उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
कौसी खेती गर्दा अपनाउनुपर्ने मुख्य दश कुराहरु के–के हुन ?
१ बगैँचा कहाँ निर्माण गर्ने
२ छत बगैँचाको तयारी गर्ने
३ बागवानी अब सुरु हुन्छ
४ विविधता ल्याउनुहोस
यो तपाईंको बगैंचा हो, तपाईंको रचनात्मकता देखाउनुहोस् र केवल बिरुवामा मात्र होइन प्रयोगमा ल्याइने कन्टेनर ९भाँडो० मा पनि भिन्नता ल्याउनुहोस् । पुनः नवीकरण कन्टेनरहरू प्रयोग गरेर यसलाई सही वातावरणमा अनुकूल बनाउनुहोस् । नरिवलका गोला, कोकका बोतल, भान्साको भाँडा, बाँसका टोकरी, प्लास्टिकका बट्टा, फुटेका बाल्टी आदि जस्ता सामानहरु फाल्नुभन्दा अगाडि एकपल्ट सोच्नुहोस्।
५ बिरुवाहरूको छनोट गर्नुहोस
६ छत बगैँचाबाट ठूलो आशा
यदि तपाईं आफ्नो छत बगैँचाको उचित हेरविचार गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, प्रकृतिले तपाईकै पक्षमा इनाम स्वरुप राम्रो वातावरण फर्काउँछ । छतको एक वर्ग्मिटरले एक वर्षमा २५–३० किलोसम्म तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ । तपाईं एउटा सिजनमा छ वटा विभिन्न प्रकारका तरकारीहरू पनि फलाउन सक्नुहुन्छ । छत खेतीबाट प्राप्त ताजा उत्पादनको स्वाद लिनुहोस्।
७ एउटा छतलाई बगैंचामा परिवर्तन गर्न समय आवश्यक छ
८ बगैँचाको रेखदेख
९ राम्रो कुरा लागतमा आउँछ
१० छत बगैँचाको लाभ
छत बगैँचाको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यो हो कि जब तपाईंलाई प्रकृतिको आनन्द लिन मन हुन्छ तब छत बगैँचामा जान सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंको घरलाई ६–८ डिग्री तापक्रम घटाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले एयर कन्डिसनिङ लागतमा ठूलो बचत हुन्छ । यसले भवनद्वारा गर्मीको अवशोषण पनि कम गर्छ र गर्मी र ठण्डादेखि इन्सुलेसनको रूपमा काम गर्छ । तपाईं आफ्नो घरमा ताजा स्वच्छ हावा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको छतमा बढेको स्वस्थ र संगठित रूपमा हरियो र ताजा तरकारीको मजा लिन सक्नुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति: Mar 13, 2020 15:13:47